Maxaa kasoo baxay kulankii Joe Biden iyo Uhuru Kenyatta?
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay Aqalka Cad ku qaabilay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waana kulankii ugu horreeyay ee Biden uu si toos ah ula yeesho hoggaamiye African ah tan iyo markii noqday madaxweynaha Mareynkanka.
"Labadeenuba, waxaan aaminsanahay inay muhiim tahay wax ka qabashada caqabadaha gobolka iyo kuwa caalamiga ah," ayuu yir Biden.
Dalka deriska la ah Kenya ee Itoobiya, dagaal ayaa ka socday waqooyiga gobolka Tigray muddo ku dhow hal sano, waxaanaa colaaddu ay dishay dad aan tiradooda la sheegin - tirada dhimashada lafteeda ayaa ah mawduuc la isku haysto.
"Maanta, waxaan ka wadahadli doonnaa waxa Kenya iyo Mareykanka ay ka wada sameyn karaan Geeska Afrika, si loo hormariyo nabadda iyo amniga," ayuu yiri Biden.
"Waa wax laga naxo run ahaantii, waan ku faraxsanahay inaad wax iga weydiisay arrintan, sababtoo ah malaha ma jirin dareen ku filan oo ku saabsan waxa dhacaya oo Mareykanku siiyay" ayay raacisay.